Izingxenye eziyinhloko zomshini ohlangene we-vulcanization zenziwe ngamandla aphezulu e-aluminium alloy. Ifakwe ikhabethe likagesi lokuqhuma elinokuzenzakalela futhi ine-0-2Mpa ngisho nengcindezi enikezwa uhlelo lokucindezela, ngakho-ke isebenza kalula, iyathwala. Ifudumeza ngento yokushisa kagesi, ngakho-ke isebenza kahle ngokushisa okushisayo okuphezulu nokushisa okufanayo.
1. Ingcindezi ye-Vulcanization 1.0-2.0 MPa;
2. Ukushisa kwe-Vulcanization 145 ° C;
3. Umehluko emazingeni okushisa angaphezulu kwepuleti e-vulcanized ± 2 ° C;
4. Isikhathi sokushisa (kusuka ekushiseni okujwayelekile kuya ku-145 ° C) <imizuzu engu-25;
5. I-Voltage 220V / 380V / 415V / 440V / 480V / 550V / 660V, 50 / 60HZ, izigaba ezi-3;
6. Ibanga lokulungiswa kwethempelesha: 0 kuye ku-199 ° C;
7. Isikhathi sokulungiswa kwesilinganiso: imizuzu engu-0 kuye kwengu-99;
Sectional Belt Vulcanizing Press ZLJ Series Heavy-duty Uhlobo
Uhlobo olusha lwe-Vulcanizing Press, uhlobo olulodwa lwesisindo esisindayo se-vulcanizer, sebenzisa izinto ezintsha zokwakha, kufaka phakathi isikhwama sengcindezi, imigoqo enqamulelayo enepulangwe lokushisa elijwayelekile nebhokisi lokulawula.